पश्चिममा भारी वर्षाः बाढीमा परी ५५ जनाको मृ त्यु , १३ सय बेपत्ता ! मनमा माया हुनेले RIP लेखौ – Sandesh Press
July 18, 2021 356
पश्चिममा भारी वर्षाः बाढीमा परी ५५ जनाको मृ त्यु , १३ सय बेपत्ता ! मनमा माया हुनेले RIP लेखौपश्चिममा भारी वर्षाः बाढीमा परी ५५ जनाको मृ त्यु , १३ सय बेपत्ता ! मनमा माया हुनेले RIP लेखौपश्चिममा भारी वर्षाः बाढीमा परी ५५ जनाको मृ त्यु , १३ सय बेपत्ता ! मनमा माया हुनेले RIP लेखौपश्चिममा भारी वर्षाः बाढीमा परी ५५ जनाको मृ त्यु , १३ सय बेपत्ता ! मनमा माया हुनेले RIP लेखौपश्चिममा भारी वर्षाः बाढीमा परी ५५ जनाको मृ त्यु , १३ सय बेपत्ता ! मनमा माया हुनेले RIP लेखौ
‘ओलीलाई कसैले छोए अरिंगाल झै जाइलाग्छौ’ : महेश वस्नेत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा एमालेको युवा संगठन निकै सकृय भएको छ । सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका युवा नेता तथा सांसद महेश बस्नेतले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा विरुद्ध कसैले षडयन्त्र गरे अरिंगाल झै जाइलाग्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध भण्डाफोर अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेकै दिन महेश वस्नेतले पनि यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
युथफोर्सको इन्चार्ज समेत रहेका बस्नेतले अदालतको आदेशविरुद्ध आन्दोलनका लागि तयार रहन युवाहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। भक्तपुरको गुण्डुमा काठमाडौं उपत्यकाका युथफोर्सका अगुवा कमान्डरहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै बस्नेतले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । बस्नेतले ुकसैले छोए अरिंगाल झै जाइलाग्नेु बताउँदै माधव कुमार नेपाल समूहले गठन गरेको अखिल फोर्सको कुनै अस्तित्व नभएको समेत बताए।
बस्नेतले काठमाडौंमा साउन ९ गते युथफोर्सले मार्चपास गर्ने समेत बताए। उक्त मार्चपासमा १० हजार युथफोर्सका कार्यकर्ता उतार्ने घोषणा बस्नेतले गरेका थिए।
Prevकिड्नी खराब हुनभन्दा पहिला शरीरले दिन्छ यी ३ संकेत, भूलेर पनि नगर्नुहोस् वेवास्ता
कुन-कुन राशिबीच विवाह हुँदा अति शुभ, कुन-कुन राशीबीच अशुभ !